အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ပထရား မှာ ၀င်တဲ့ “နေ” နဲ့ “ရွှေတံငါ” ပြီးတော့ “အချိန်တွေတိုင်းမှာ” လွမ်းနေတဲ့ “ဂျပ်ဆင်ထိပ်က လရိပ်ပြာ”
ပထရား မှာ ၀င်တဲ့ “နေ” နဲ့ “ရွှေတံငါ” ပြီးတော့ “အချိန်တွေတိုင်းမှာ” လွမ်းနေတဲ့ “ဂျပ်ဆင်ထိပ်က လရိပ်ပြာ”
ကွန်ယက်ဖွင့်ကာ ၀မ်းစာ ရှာနေကြတယ်
ဆောင်းငွေ့ကကြွယ်ကြွယ် လောင်းကလေးနဲ့ ကွယ်
ဧရာ စုံဝယ် နွဲကြအသွယ်သွယ်
အိုပိုက်ကွန်များကို အနားပေးကာ ပျော်ပျော်နေချင်တုံးမယ်
ခင်ခင် ရယ် ပြုံးတယ်
အချစ်ရယ် တူနွဲဖို့ဖြင့် မောင်တွေးမိတော့တယ်
(ဟိုး ငယ်ငယ်ကလေးလေး ဘ၀ထဲက ကိုယ်အရမ်းကြိုက်ခဲ့တဲ့ သီချင်းပါ
မေ့မေ့ ဒိုင်ယာရီ ထဲက တွေ့တာ
ဖေဖေ က ဆိုဆိုပြ ခဲ့တယ် ထင်ပါတယ်
ကိုယ်နဲ့ ဒီသီချင်းလေးက ငယ်ငယ်လေးထဲ က ရင်းနေတယ်
ကလေးဘ၀ က လွမ်းစရာကောင်းလိုက်တာ....
ဖေ နဲ့ မေ ကိုလဲ သတိရတယ်
ပုံတွေ က တော့ ဒီတပတ် ပထရားသွားတုံးက ရိုက်ခဲ့တာ ပါ။ ပထရားရဲ့ နောက်ကျ သင်္ကြန်အကြောင်းသပ်သပ်ရေးပါအုံးမယ် ခုဒီပိုစ့်က သီချင်းလေးကို ခံစားစေချင်လို့ ပါ
ပင်လယ်ကတော့ အလကားပဲ ကိုယ်တို့ ဆီက ငွေဆောင်လောက်မလှဘူး
ငပလီ ဆို ယှဉ်စရာတောင်မရှိ ကျွန်းတွေတော့ လှတယ်ပြောတယ် ဒီမှာ
နောက်မှ သွားဖြစ်ရင် တင်မယ်)
ဂျပ်ဆင်ထိပ်က လရိပ်ပြာရယ် -ထူးအိမ်သင်
နေ၀င်ပြီဆိုရင် ကိုယ်လေ ငိုချင်တယ်
အဆောင်မှာ မှောင်ရီ ၀ိုးတ၀ါးနဲ့
အမှောင်မှာ အသာအယာ နားစွင့်ခဲ့
အရင်းနှီးဆုံး နှလုံးသားများနဲ့ နားလည်နိုင်ခဲ့လဲ
ဂျပ်ဆင်ထိပ်က လရိပ်ပြာရယ် (လွမ်းမိတယ်)
အဆောင်သူလေးမှာ ဆွေးမြေ့လို့ကြေကွဲ (လွမ်းမိတယ်)
သူဘယ်ရောက်နေလဲ မသိတော့ပြီပဲ (လွမ်းမိတယ်)
(ထူးအိမ်သင် ရဲ့ ဂျပ်ဆင်ထိပ်က “လရိပ်ပြာ” ပါသောင်ပြင်ပေါ်လမ်းလျောက်ရင် ညည်းမိတဲ့သီချင်းနောက်တပုဒ်ပါ
စိတ်ကူးယဉ်တတ်တယ် ဆိုတာ ရိပ်မိလောက်ရောပေါ့နော်.... :D ....)
တိမ်ပြာပြာ နေရောင်မှာ ရွက်လွှင့်လို့နေ
ရင်ထဲမှာ ခိုဝင် အချစ်ဆုံးလေးမျက်နှာ
နေ့ညများပြောင်းလဲ သွားတဲ့ ဒီလောကထဲ
အချစ်စစ် တရားနဲ့ ကိုယ့်မှာ တည်ငြိမ်ခဲ့...အိုး.......
(လေးလေးဝါး ပထမ ဆုံးထွက်တဲ့ အခွေထဲမှာပါတဲ့သီချင်းပါ
ကိုယ့်နားထဲစွဲသလို ပါးစမ်ဖျားမှာလဲ စွဲနေတယ်
Posted by တီချမ်း at 12:27 PM
ကဗျာကို နောက်မှ သေချာဖတ်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျင်ဆင်ထိပ်က လရိပ်ပြာတော့ မသိဘူး။ ထိပ်ပြောင်ပြောင်နဲ့ ကျောင်းဆရာကြီးတော့ ရှိလောက်တယ်။ ကျောင်းဆရာကြီးက တီချမ်းကို လွမ်းနေလို့ပါတဲ့... :D
Anonymous April 22, 2009 at 3:11 PM
ချစ်တီရေ...... ဂျက်ဆင်ထိပ်က လရိပ်ပြာတဲ့။ တော်သေးတယ်နော် သစ်ပုတ်ပင်အောက်က ခုံတန်းမဟုတ်လို့။ ဟဟဟ
အန်တီချမ်း April 22, 2009 at 4:55 PM
nye: ဟိုသီချင်းနဲ့မတူဘူးနော်.. `သဲသာသောင်နဲ့ ငွေရောင်ကမ်းဆွယ်.. ရွက်ကြိုးဆင်တဲ့ အင်တိုင်းဝါး. ကုက္ကလင်နဲ့ လှေယဉ်များရယ်.. နာဝါ လှေများတွေရယ် ဆွေးသူကိုကယ်ယူပါလှည့်.. လမ်းကြုံရင်ခေါ်စေချင်ငဲ့ ´ ဆိုတဲ့ဟာ..
Mae April 22, 2009 at 5:07 PM
ဆည်းဆာပုံလေးတွေ လှတယ်၊ Pataya ကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပဲ သွားဖူးလို့ ကမ်းခြေတောင်မရောက်ဖူးဘူး၊ Host က lady boy ဆိုတော့ Boys Town ပဲ လိုက်ပြတယ်၊
ဝင်းဦးသီချင်းနဲ့ ထူးအိမ်သင်သီချင်း ဘယ်က ရနိုင်မလဲဟင်? အိမ်က မေမေလဲ ဝင်းဦးသီချင်းအရန်းကြိုက်တယ်၊
ပန်းတွေ ကြွေနေတာတွေ့ရင် "ပန်းခင်းလမ်းပဲ လျှောက်ပါ" ဆိုတဲ့ သီချင်းကို အလိုလို အော်ဆိုဖြစ်တယ်၊ ဟား၊
အန်တီချမ်း April 22, 2009 at 5:11 PM
အဲဒီ ၂ ပုဒ်စလုံးသူငယ်ချင်းတွေ ပို့ပေးထားလို့ရှိတယ် လိုချင်ရင် ပို့ပေးမယ် အီးမေးလ်ပြော
wai April 22, 2009 at 5:29 PM
I have inspired and writtenashort story based on this Htoo Eain Thinn's song. I always considered why he didn't come back when school opened after summer holidays.55555(laugh in Thai)
အန်တီချမ်း April 22, 2009 at 6:03 PM
Mae April 22, 2009 at 11:26 PM
စူးနွယ် April 23, 2009 at 4:42 PM
ရွှေတံငါ...သိပ်ကောင်းတဲ့သီချင်းလေးပဲ။ ၀င်းဦးဆိုထားတဲ့ အသံကိုတောင် ပြန်ကြားယောင်မိတယ်။ အိမ်မှာ အခွေရှိခဲ့ဖူးတယ်။ နောက်တော့ ဘယ်ရောက်သွားလည်း မသိတော့ဘူး။ အမေတို့အဖေတို့က ၀င်းဦးကြိုက်တယ်လေ။ သူတို့က ခေတ်ဟောင်းသီချင်းတွေဖွင့်တော့ ကိုယ်လည်း ခေတ်ဟောင်းတေးတွေကို ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြိုက်တတ်ခဲ့တယ်။ စာသားနဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေကလည်း လှတယ်လေ။
အန်တီချမ်း April 23, 2009 at 5:04 PM
တီ့ မှာ ရှိတယ် လိုချင်ရင် ပို့ပေးမယ်
Anonymous April 25, 2009 at 12:42 AM
ဒီနေ့ ဖရော်ဖက်ဆာက ဆူတယ်။ ပေပါတွေအချိန်မှီမတင်နိုင်လို့ တဲ့ တီချမ်းရယ်။ ရှင်တို့ နဲ့ လျောက်သွားရတာ အင်မတန်မှပျော်တယ်။ ပထရားက ကျနေကြီးကို ကြည့် ပင်လယ်ကမ်းစပ်က သဲနဲ့ ရေကြားလျောက်ရင်း ရှင့်လို ကဗျာတွေတော့ မမြင်မိဘူး။ မြင်မိတာက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ဖြတ်ပြီး အဲဒီ အချိန်က မြန်မာပြည်အနောက်ပိုင်းကို ၀င်မယ့် မုန်တိုင်းပဲယာခေါင်းထဲမှာရှိတယ်။
စူးနွယ် April 27, 2009 at 1:12 PM
တီချမ်းရေ..မစူးနွယ်ပါရှင်။ ၀င်းဦးရဲ့သီချင်းနဲ့ ထူးအိမ်သင်ရဲ့ သီချင်း ပို့ပေးပါလားဟင်။ အရမ်းကြိုက်လို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။